အမေးအဖြေများ - Tenpro Elec-Power သိပ္ပံ-Tech မှ LLC ။
ဖြန့်ဖြူးကွန်ယက် Automation Intelligent Terminal နှင့်ထုတ်ကုန်များ
အဆောက်အဦးအပြင်လေဟာနယ် circuit ကိုအနိုင်အထက်, ဝန် switch ကို, reclosing
မိုးလုံလေလုံလေဟာနယ် circuit ကိုအနိုင်အထက် & switch ကို
လက်စွပ်အဓိကယူနစ် & switching device ကို
အလတ်စားနှင့်အမြင့်မားသောဗို့အား switch ကိုကက်ဘိနက် set ကို
သံမဏိ banding လည်စည်း
မြင့်မားသောဗို့အားလေဟာနယ် circuit ကိုအနိုင်အထက်ကဘာလဲ?
1980 မီ, လေဟာနယ် circuit ကိုအနိုင်အထက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ကနဦးအဆင့်တွင်ရှိကြ၏။ နည်းပညာပိုင်း, လူတွေအဆက်မပြတ်ရှာဖွေစူးစမ်းနှင့် 1985 ၎င်း၏ rated လက်ရှိ 5000A ရောက်ရှိပြီးနောက်သက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်စံချိန်စံညွှန်းများထူထောင်ခဲ့ကြသည်သည်အထိနည်းပညာဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများရေးဆွဲနိုင်ဖြစ်ခြင်းမခံခဲ့ရ, အကြေကွဲလက်ရှိ 50kA ကောင်းတစ်ခုအဆင့်ကိုရောက်ရှိနှင့် 35kV တစ်ဗို့အားအဆင့်အထိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာခဲ့တာပါ ။
သေးသေးလေး circuit ကိုအနိုင်အထက်၏လျှောက်လွှာများ၏နယ်ပယ်ကဘာလဲ?
အဆိုပါသေးသေးလေး circuit ကိုအနိုင်အထက်အဆင့်မြင့်တည်ဆောက်ပုံ၏ဝိသေသလက္ခဏာများ, ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်ရည်, ခိုင်မာတဲ့ကြေကွဲစွမ်းရည်နဲ့လှပတဲ့အသွင်အပြင်ရှိပါတယ်။ ဒါဟာအဓိကအား, AC အ 50HZ သို့မဟုတ် 60HZ နှင့်အတူအရပ်တို့ကိုအတှကျအသုံးပွု 400V အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဗို့ rated နှင့် 63A အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင် rated ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရိုက်တဲ့ပြီးရင်နှင့်ရုံးအဆောက်အဦးများ, လူနေအိမ်အဆောက်အဦးများနှင့်အလားတူအဆောက်အဦး၏အလင်းရောင်အတွက်ဖြန့်ဖြူးလိုင်းများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ Short-circuit ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအတှကျအသုံးပွုနိုငျသညျ။ ဒါဟာခဏခဏမဖြစ်ပျက်သော On-ချွတ်စစ်ဆင်ရေးနှင့်လိုင်းများပြောင်းလဲခြင်းအတွက်လည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါနိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု High-ဗို့နှင့်အနိမ့်ဗို့လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ 1000V (DC ကအဘို့အ 1500V) ၏နယ်နိမိတ်ဗို့ရှိသည်။ AC အ 1000V အထက်တွင် high-ဗို့အားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းဖြစ်တယ်, 1000V နှင့် 1000V တစ်ဦးအနိမ့်ဗို့အားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်ထက်နည်း။ တခါတရံမှာထရန်စဖော်မာကိုလည်း High-ဗို့လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတွင်ထည့်သွင်းထားပါသည်။